इन्टरनेसनल डाटा कर्पोरेसन (आईडीसी)ले सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासिक नतिजा अनुसार टप चार स्मार्टफोन ब्रान्ड
वैशाख १८ : इन्टरनेसनल डाटा कर्पोरेसन (आईडीसी)ले सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासका लागि स्मार्टफोन अनुगमन नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।
उक्त प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ओप्पोले विश्व स्मार्टफोनको बजारमा चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । ओप्पो २५.६ मिलियन बिक्री परिमाणकासाथ चौथो स्थानमा रहेको हो । ओप्पोको वार्षिक बृद्धिदर २९.८ प्रतिशत छ । यो क्रममा ओप्पोको मार्केट सेयर ७.४ प्रतिशत छ ।
आईडीसीका अनुसार तेस्रो स्थानमा चिनियाँ ब्रान्ड हुवावे छ । हुवावेको यो अवधिमा बिक्री परिमाण ३४.२ मिलियन रहेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको हुवावेको मार्केट सेयर ९.८ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा एप्पल छ । एप्पलको पहिलो त्रैमासिकमा बिक्री परिमाण ५१.६ मिलियन रहेको छ । एप्पलको मार्केट सेयर १४.९ प्रतिशत रहेको आईडीसीले जनाएको छ ।
आईडीसीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सदा झै सामसुङ पहिलो स्थानमा छ । २२.८ प्रतिशत मार्केट सेयरका साथ पहिलो स्थानमा रहेको सामसुङको पहिलो त्रैमासिकमा ७९.२ मिलियन बिक्री परिमाण रहेको छ ।
फेसबुकले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ? फेसबुकको चेतावनी फेसबुकमा मानपरि नगर्नुस ?
ग्यालेक्सी नोट ७ सामसुंगले नै फिर्ता लिने
आइफ़ोनको नया संस्करण आइफ़ोन ७ सबजनिक हुदै
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउन अभियानमा महावीर
फेसबुकले विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध हटायो
फेसबुकमा अब ४५ भाषामा पोष्ट गर्न सकिने
सरकारले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने घोषणा
फेसबुकमा अब व्यक्तिगत सन्देश लुकाउन मिल्ने भएको छ